Ka Hor Kulanka Ay Barcelona Booqan Doonto Kooxda Real Soiedad, Waa Sidee Wax Qabadka Messi Ee Kulamadii uu Sociedad Ka Hor Yimid. - Laacib.net
Ka Hor Kulanka Ay Barcelona Booqan Doonto Kooxda Real Soiedad, Waa Sidee Wax Qabadka Messi Ee Kulamadii uu Sociedad Ka Hor Yimid.
Lionel Messi ayaa sugeysa qabashada shaqo aad u adag ee ku aadan kulanka horyaalka La Liga ee dalka Spain, kadib marka ay maalinka Axada Barcelona marti ku noqoto garoonka Anoeta ee kooxda Real Sociedad si ay u wada ciyaaraan wareegii 19aad, Blaugrana ayaa la fahansan yahay in kulamada ay lasoo ciyaartay kooxdan ay si xoogan ugu soo dhibtootay inta badan sanadihii la soo dhaafay.
Laakiin Barcelona ayaa ku guuleysatay xili ciyaareedkii lasoo dhaafay inay soo afjarto dhibaatada ka heysatay garoonka Anoeta ee kooxda Real Sociedad, kadib markii ay guul 0-1 ka soo gaadhay, laakiin wixii ka horeeyay Barca ayaa kulan kasta dhibaato kala kulmi jirtay mudado 10-kii sano ee lasoo dhaafay ahayd.
Lionel Messi ayaa bandhig goolal aad u wanaagsan ku yeeshay kulamada uu kaga hor yimid kooxda Real Sociedad maaliyada Barcelona, 19 kulan uu kahor yimid, waxaa u suuragashay inuu kaga dhaliyo 14 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 6 gool kale, taasoo ka dhigeysa inuu kaa qeyb qaatay 20 gool.
Laacibka reer Argantina ayaa dhinaca kale guul ku hogaamiyay kooxda Barcelona 11 kulan ka mid ah kulamadii ay la ciyaareen kooxda Real Sociedad, halka 5 kulana ay la kulmeen guuldaro, waxayna barbaro wada galeen 3 kulan kale.
Messi ayaa kooxda Real Sociedad wuxuu 15 kulan kaga hor yimid horyaalka La Liga ee dalka Spain, halka 4 kulan ka mid ah ay kuwada kulmeen Copa del Rey, balse labadan kooxood ee Barcelona iyo Real Sociedad ayaan wali kuwada kulmin tartan kale inta uu Lionel Messi xidhan yahay maaliyada Blaugrana.
Si kastaba 14-ka gool uu Lionel Messi ka dhaliyay kooxda Real Sociedad, 4 ka mid ah oo kaliya ayuu kaga dhaliyay garoonka Anoeta, halka 10-ka kalena uu kaga dhaliyay Cump Nou.
Lionel Messi ayaa hadda ku jira qaab ciyaareed aad u fiican isaga oo 16 gool ku hogaaminaya gool dhalinta La liga isla markaana 2 gool ka soo dhaliyay kulankii ugu danbeeyay ee ay kooxdiisa Barcelona 5-0 ku xasuuqday kooxda Celta Vigo ee Copa Del Rey ka tirsanaa.
Jr black king 13-01-2018 at 9:25 pm -
Waan ka guuleysan doonaa
Kulanka barito ee real sociedad
Incha allh l mssi. Wuxuu abuuraa fursado. Halis ah halka uu kuwa kala ka dhaliyo balse.
Kulanka barito waa mid noo muhiim ah in aanu badino incha allh viva barca ❤️🤝👊🏾
mohamed 13-01-2018 at 4:46 am -
bayjkan waa bay laga taager messsi
Ali 12-01-2018 at 11:03 pm -
Sanadki hore laliga kuma soo badin anoeta ee copa delarey ayay kuso badiyeen iska hubiya halkaas